Ziziphi izixhobo zegama elingundoqo lee-Amazon?
Ukwenza imveliso yakho ibonakale kwi-Amazon search, kufuneka ulungise uluhlu lwakho. Enye yezinto eziphambili zokucwangcisa iinjongo zophando ngegama elingundoqo. Kufuneka uqonde izinto ezisisiseko kule nkqubo ukuphucula ixabiso lemveliso yakho.
uphando lwegama elingundoqo luchaza imibuzo yokucinga kunye nemigqaliselo yokukhangela abaxhamli bakho abanokusetyenziswa ukufumana iimveliso zakho. Le nkqubo iyimfuneko kubathengisi base-Amazon njengoko kubancedisa ukuba bafumane imigaqo yokukhangela echaphazelekayo kumashishini abo okanye kwi-market niche. La magama angundoqo afanelekileyo abanike ithuba lokuphucula ixabiso lemveliso yabo kunye nokunyusa ingeniso yerhwebo jikelele.
Ezinye izixhobo zophando lwe-intanethi zinika iziphakamiso zophando ezingasetyenziselwa ukwandisa uphando lwegama elingundoqo. Kunzima ukuhlukanisa i-Amazon engundoqo yezinto eziphambili zokwenza uphando, kodwa ezifanelekileyo ziquka i-Google Keyword Planner, Keywordtool.io, kunye ne-Semalt Amazon SEO. Ezi zixhobo zinokukunika uphando olubanzi lwegama eliphambili kunye nokulandelwa kwezithuba zegama elingundoqo.
Indlela yokufumana amagama angundoqo ajoliswe kuyo kwaye uphucule isikhundla sakho semveliso?
Uninzi lwezixhobo zophakamiso lwegama elingundoqo lwe-intanethi zisebenza ngendlela efanayo. Okokuqala, kufuneka ufake ifowuni yakho yophando kwibhokisi yophakamiso lokukhangela uze uchofoze "qalisa ukukhangela." Njengomthetho, emva koko, uya kuqala ukufumana amagama asemgangathweni axhomekeke kumacebiso e-Amazon. Unokufutshane uluhlu lwamagama akwii-keywords kwaye ushiye kuphela owona mfuneko kwi shishini lakho. Kukho imisebenzi eninzi ekuncediseni ukukhangela kwakho. Ukuba usanda kuqulunqa ishishini lakho kwi-intanethi, kunengqiqo ukusebenzisa igama elide lomsila kuqala kuba baya kukunika ithuba lokufikelela kwiindawo eziphezulu ze-Amazon SERP.
Emva kokuba ufumene uluhlu lwezona zinto zifanelekileyo kwiimpawu zoshishino lakho, kufuneka uhambe kwiphepha lokulandela umkhiqizo kwaye ungeze amagama akho okukhangela. Ukulandelela okubhaliweyo kuqala ngokuzenzekelayo xa ukongeza amagama akho okucatshungelwa kwinkqubo. Ithuluzi lokulandelela i-Amazon luza kukunika ukuhlaziywa okuqhubekayo ngokulandelela izithuba zamagama eziphambili zangoku. Olu lwazi luyakunceda ukuba ube isinyathelo phambi kwabaqhubi bakho. Ngaphezu koko, uya kukwazi ukujonga apho imveliso yakho ifakwe khona.
Nangona kunjalo, isiqingatha sengxaki ukufumana amagama angundoqo amagama; ufuna kwakhona uphucule isikhundla sabo. Yingakho kufuneka usebenzise amagama akwii-key target. Okokuqala, kufuneka ukwandise isihloko sakho kunye nenkcazo ngokuzifaka ngokuthe ngqo kwiimpawu zakho zokukhangela ezifanelekileyo. Ngaphezu koko, kufuneka udale ii-URL ezinokungasebenzisi umsebenzisi ngaphandle kwegama lakho legama kunye negama elingundoqo. Zonke ezi ndlela zendlela yokucwangcisa kwiinkcukacha eziyinkimbinkimbi ziyakuchaphazela kakuhle i-Amazon yakho yegama elingundoqo kunye nokuphucula ulwazi lwenkcazo phakathi kwabathengi bakho.
Ngaphezu koko, ingqalelo efunekayo kufuneka ihlawulwe kuluhlu lwakho. Udinga ukubonelela abaphandi kunye ne-Amazon bots kunye nolwazi oluchanekileyo malunga neenzuzo zeemveliso kunye neempawu zakho. Yingakho kufuneka uzalise zonke iinkalo ukuqinisekisa ukuba abathengi bakho banokufumana iimpendulo kuzo zonke iimeko ezinokwenzeka Source .